I-35 YEENWELE EZILUNGILEYO ZAMADODA EZINENWELE EZIJIYILEYO (ISIKHOKELO SE-2021) - IINWELE ZAMADODA
I-35 yeenwele zeNwele eziBalaseleyo zaMadoda aneenwele ezijiyileyo
Eyona Iinwele Zamadoda I-35 yeenwele zeNwele eziBalaseleyo zaMadoda aneenwele ezijiyileyo
Iinwele ezishinyeneyo zinethamsanqa. Nokuba unwele olude okanye olufutshane, ezona ndlela zilungileyo zokunxiba zamadoda aneenwele ezishinyeneyo zibandakanya ezona zisikiweyo zipholileyo kunye nezimbo, ezinje ngombala…
Iinwele ezishinyeneyo zinethamsanqa. Nokuba unwele olude okanye olufutshane, ezona zinwele zilungele amadoda aneenwele ezingqindilili zibandakanya ezona zisikiweyo zipholileyo kunye nezitayile, ezinje ngesityalo esenziwe ngombala, ikama ngaphezulu kokuphela, intshontsho yanamhlanje, umtyibilizi ongaphantsi, kunye nefeksi. Ngelixa iinwele ezingqindilili zinokuba rhabaxa kwaye kube nzima ukuzenza, ukusebenzisa iinwele ezifanelekileyo zokuloba ziya kwenza abafana bajonge.
Ukuba ucinga ngokutshintsha inkangeleko yakho kwaye ufuna izimvo ezithile kwizinwele ezishinyeneyo zamadoda, zininzi Izitayile ezilungileyo zokucheba iinwele ukukhetha kwi. Apha ngezantsi, jonga isikhokelo sethu kwezona ndlela zithandwayo zinde, ziphakathi kunye nezimfutshane zeenwele ezishinyeneyo. Siqinisekisile ukubandakanya iiyantlukwano ezininzi zokusikeka, ukuthungwa kunye neentlobo zeenwele, kubandakanya i-wavy eshinyeneyo kunye neenwele ezigobileyo.
Khawukhumbule nje ukuba, nokuba ujonga ntoni, kusafuneka ufunde indlela yokuthambisa iinwele ezingqindilili ngendlela efanelekileyo ukuba ufuna ukufezekisa obu bukhangeleka bunje. Kwaye ngokusebenzisa ezona mveliso zeenwele zamadoda zibalaseleyo, uya kufumana iinwele ezifanelekileyo ngalo lonke ixesha.
1Iinwele eziPhambili zamadoda zeenwele ezishinyeneyo
MbiniIinwele ezimfutshane zeenwele ezishinyeneyo
3Izitayile ezinde zeenwele ezishinyeneyo
4Ezona mveliso zeNwele zaMadoda ziBalaseleyo kwiNwele ezijiyileyo
4.2I-Wax yeenwele kunye nodongwe
5Ezona ndlela zilungileyo zokuhombisa iinwele ezishinyeneyo
5.1I-messy Curly Thick Hair + Mid Skin Fade
5.2Umbala wePompadour + oPhezulu oPheleyo + woYilo lweenwele
5.3I-Fohawk + i-Undercut Fade
5.4Iinwele zeSpiky ezinombala + Fade ezisezantsi
5.5Icandelo elisecaleni lePompadour + Razor Fade + Line Up
5.6Icala eliTyiweyo elibunjiweyo
5.7Iinwele eziQinisekisiweyo eziBuyelwe ngasemva + Ukuphela kweTaper
5.8Ikama elide ngaphaya kweTaper Fade
5.9Umyalezo oMiselweyo weThafile + uFade ophantsi
5.10Iifutshane eziQhelekileyo eziPhezulu eziPhezulu + eziPhantsi ziMilo
5.11Ubunzima obuVuthayo obuBuyayo + oPhezulu oPhezulu
5.12Ikama Ngaphezulu kwe-Undercut + Inxalenye Enzima
5.13Iinwele ezijiyileyo zeSpiky + Amacala achetyiweyo
5.14Iinwele eziBhulashiweyo + eziPhakamileyo zeTaper Fade + iindevu ezipheleleyo
5.15Isidindi seMessy Part + Amacwecwe atyhidiweyo + Iindevu ezixineneyo
Iinwele eziPhambili zamadoda zeenwele ezishinyeneyo
Ukusuka kwinxalenye yeklasikhi ukuya kwisivuno esiqingqiweyo sangoku ukuya kwizinwele ezithandwayo zobude obuphakathi, abafana abaneenwele ezishinyeneyo banesipho sokukhetha kwiinwele ezahlukeneyo zamadoda. Ngelixa ngokuqinisekileyo ungabuza umchebi wakho ngeengcebiso zakhe malunga nendlela yokucheba iinwele zakho, kusoloko kububulumko ukuhamba kwindawo yokucheba iinwele nemizekelo yeembonakalo zakho ozithandayo.
Umzekelo, ukuba ukhetha iinwele ezimfutshane ukwenza iinwele zakho ezingqindilili kube lula ukuzilawula kunye nesitayile kusasa, sicebisa ukuba ngaphantsi okanye ukubuna kumacala adityaniswe nekama ngaphezulu okanye iinwele ezibrashiweyo zangasemva. Ukuba ujonga indlela emfutshane kakhulu, ungafuna nokuzama ukunqunyulwa kweqela labasebenzi okanye usike i-buzz onokuzisika ekhaya.
Kwelinye icala, ukuba uzimisele ukutyala ixesha ngentsasa nganye, ubude obuphakathi ukuya kwiinwele ezinde ezingqindilili kunokuba lukhetho lwakho. I-pompadour okanye i-quiff enamacala amacwecwe okanye iindlela ezihamba ixesha elide zingasebenza kakuhle. Sebenzisa i-wax encinci yeenwele kulawulo oluthile kunye nokugqitywa kwendalo okubhaliweyo, kwaye iinwele zakho ezomeleleyo ziya kuhlala endaweni yonke imini.
Ekugqibeleni, ingqokelela yethu yeenwele ezipholileyo zamadoda zeenwele ezishinyeneyo ziya kukubonelela ngeendlela ezininzi. Ngapha koko, uninzi lwezi nwele zilula ukuzigcina kunye nesitayile- vele usebenze ngemveliso ethile ngeenwele zakho ukuba ufuna ujonge umsebenzi.
Ungcolile, isityalo esinombala yindlela entle yokufumana iinwele ezimfutshane kodwa usebenzise iinwele zakho zendalo. Kulula ukuba nesitayile kodwa ubhetyebhetye ngokwaneleyo ukuba unganxiba naphi na, inqaku elikroliweyo lesinwele esinqunyiweyo ubude baso bufutshane kuyo yonke imiphetho ngaphambili. Ngelixa umphetho omncinci wongeza into yefashoni kusiko, i-short crew cut cut yenza ukuba iinwele zakho ezingqindilili zilawuleke kwaye zigcinwe kancinci.
Uninzi lwabafana ludibanisa isivuno saseFrance kunye nokuphela emacaleni nasemva okanye kwi-undercut ukwenzela ukwenza umahluko. Ukuya kuthi ga esiphelweni, ungakhetha phakathi kokuphakama, okuphantsi, phakathi okanye ulusu luyaphela kuxhomekeke kubundlongondlongo ofuna ukudityaniswa.
Ukwenza isitayile sokucheba iinwele kulula kakhulu. Eyona mveliso yamadoda ilungileyo yeenwele ezishinyeneyo iya kuba ngumthwebeba weenwele okanye udongwe. Zombini ezi zinto zinokunika ukubambelela okuqinileyo ngokugqitywa kwe-matte ngenkangeleko yendalo yesini. Faka isicelo kakuhle kwaye ushiye ukungcola.
Inkqubo ye- ikama ngaphezulu kunzima ukufuna intshayelelo: yinto engaphelelwa lixesha kwaye iinwele zamadoda zakudala ezinokubonakala zintle kuwo nawuphi na umfana oneenwele ezishinyeneyo. Eyona nto intle malunga nekama malunga nokucheba iinwele kukuba ungayenza eyakho ngokuxhomekeke kwindlela oyisika ngayo nendlela oyilungisa ngayo.
Umzekelo, i Ikama liphele iye yabetha kwiminyaka yakutshanje kwaye ihlala yenye yezona zinwele zidumileyo ziceliweyo indawo yokucheba iinwele namhlanje . Umdlalo kumacala amafutshane, ukuthambeka kweenwele eziphezulu, kukusika okusebenza kakuhle ngokuchaseneyo. Buza umchebi wakho ukuba aphele ulusu oluphezulu ukuba ufuna into edinisayo; Ngaphandle koko, ukuba ukhetha ukuthatha ngokungathandabuzekiyo, zama ikepu yokuphelisa itephu ephantsi ngaphezulu.
Ngokuphathelele kwizinwele ngaphezulu, i-barber yakho kufuneka isebenzise isikere ukushiya ubuncinci ii-intshi ezi-2 ukuya kwezi-3 zobude. Oku kuyakuvumela ukuba ubhale isitayile, ipompadour emfutshane okanye iinwele ezi-spiky ukuba uyadika ngohlobo olufanayo.
Ukuthayipha ikama ngaphezulu, faka ipomade okanye thambisa uze uyisebenze. Ukuba unefdd ephezulu okanye unqumle ngaphantsi kwaye ufuna ukuba zonke iinwele zakho zibrashiwe kwelinye icala, sebenzisa ikama ukuyitshayela. Ukuba akunjalo, fumana indawo yendalo kwizinwele zakho uze wenze icala elisecaleni.
iinwele zamadoda aneenwele ezityebileyo
Ngokuqinisekileyo i-quiff yenye yezona zinwele zezitayile zamadoda aneenwele ezishinyeneyo. Inwele yanamhlanje ye-quiff isikwe ngamacala amafutshane nangasemva ngeenwele ezinde ngaphezulu kwentloko. Ukuphela okanye ukushukuma kuya kuvumela ukubonwa kwesitayile phezulu ukuze kubonakale ngaphandle kuba isantya silungele ivolumu yendalo.
Ngeenwele ezi-3 ubuncinci zentloko phezu kwentloko, uya kuba nakho ukwanelisa isimbo se-quiff eyahlukileyo, yomoya, kodwa awuyi kufuna ukuchitha iiyure ukubonakala kakuhle. Eyona nguqulelo ishushu ye-quiff hairstyle yeyona nto imdaka ngombala. Nangona kunokuthatha ixesha ukufumana, iinwele zinika ulondolozo olusezantsi kunye nembonakalo ekhululekile.
Mane usebenze ngemveliso yeenwele ngeenwele zakho kwaye uyomise umva umva ukufezekisa iinwele zodidi. Sebenzisa i-pomade yokugqibezela okukhanyayo okanye imveliso ye-matte ngenkangeleko ebunjiweyo.
Inkqubo ye- iinwele ezibuyisiweyo lolunye ujongo oluqhelekileyo olusebenzela bonke iimilo zobuso kunye neentlobo zeenwele. Nangona olona hlobo lusikiweyo lubuyiselwe umva ngaphantsi, zininzi iindlela zokufumana esi sitayile kwaye zonke zikhangeleka zilungile nokuba une-wavy eshinyeneyo okanye iinwele ezigobileyo.
Kubaqalayo, ukubuyela umva kunokuhlala kulo naluphi na uhlobo lokusikwa emacaleni. Ukusuka kwindawo ephezulu okanye esezantsi yokuthamba, i-tapered okanye ulusu olusikiweyo, okanye a unqamlezo lwangaphantsi , Abafana banokucela umchebi wabo ukuba asike amacala abo ngokusekwe kukhetho lwabo. Inyathelo elilandelayo kukuthatha isigqibo sokuba lingakanani ubude oza kulishiya ngaphezulu. Izinwele ezisikiweyo ezisemva zisebenza kakuhle ngobude obuphakathi ukuya kubude.
Ukuya zibuyele emva iinwele ezishinyeneyo , Uya kufuna pomade eyomeleleyo. Faka nje imveliso encinci kwaye udibanise iinwele zakho ebusweni bakho. Ukuba une-frizz okanye ulahlekile, sebenzisa enye idyasi ngaphezulu ukubuyisa zonke iinwele zakho. Ukubuyela umva okwala maxesha, jonga i-matte pomade okanye i-wax yesiphelo sendlela; Ngaphandle koko, ukubonakala okuqaqambileyo kulungile kwimbonakalo yegrisi yeklasikhi. Ngaphandle koko, abafana banokuhlala bexubha nje iinwele zabo, ukuvumela umthamo kunye nokuphakama.
Ekugqibeleni, iinwele ezibuyisiweyo zabafana zikhangeleka zodidi kunye nobuchwephesha, ngaphandle komzamo omncinci ofunekayo.
I-faux hawk, ekwabizwa ngokuba yi mfondini , ifana ne-mohawk kodwa engaphantsi kakhulu. Okwangoku ukusikwa okunesidima, iinwele ze-faux hawk azizukuza namacala achetyiweyo. Endaweni yokuba uninzi lwabantu lufumane i-faux hawk fade ngeenwele ezinde ezantsi embindini wentloko kunye nasemacaleni e-tapered. Le nwele ifanelekile kubafana abafuna iinwele ezimfutshane ukuya kubude obuphakathi kweenwele ezishinyeneyo ezibonakala zinomdla kwaye zinomtsalane.
Ukufumana i-fohawk, cela i-barber yakho ukuba iphele emacaleni akho kwaye ushiye iisentimitha ezimbalwa ubude entlokweni. Iqhinga kukufunda ukwenza isitayile i-fohawk ngokusasaza i-pomade eyomeleleyo kuyo yonke indawo kunye nokutyhala iinwele ngaphezulu ukuya embindini. Injongo kukwenza iziko elibonakalisiweyo elinomthamo ongaphezulu kunabanye. Ukwenza ukubonakala okufanelekileyo, ngokuqinisekileyo uya kufuna iinwele ezingqindilili ezithe nkqo, uzenze ukhetho olugqwesileyo.
Iinwele ezimfutshane zeenwele ezishinyeneyo
Ukuba ujonga ulondolozo olusezantsi kunye nokujonga okulula okusengqinelana neendlela ezishushu zanamhlanje, ke jonga ukusikwa kwe-buzz okanye kwe-crew cut. Zombini ziphakathi kweenwele ezimfutshane zamadoda zeenwele ezishinyeneyo.
Inkqubo ye- ukusikwa kwe-buzz Iyaqhubeka nokuba yenye yezona zinwele zininzi zamadoda. Oku kunqumlela okufutshane kunye nesitayile kujongeka kulungile kubafana abaneenwele ezishinyeneyo abanokukuphepha ukubonisa isikhumba sabo. Kwaye ukuba awufuni ubude obufanayo yonke indawo, ungasoloko ucele umchebi wakho ukuba aphelise amacala okwahluka kancinci kubude. Ukuba ufuna iinwele ezilula ezingadingi isitayile okanye onokuthi ufike ekhaya kunye neziqhoboshi zeenwele, ukusikwa kwe-buzz kufanelekile ukucinga.
Abasebenzi basikiwe, ekwabizwa ngokuba yi Inwele ye-Ivy League , lolunye uhlobo lweklasikhi olufuna umzamo omncinci wesitayile. Abasebenzi abasikiweyo bavumela enye intshi yeenwele ngaphezulu kwentloko yakho kwaye isebenza ngcono ngamacala aphelileyo okanye athambileyo. Ubude obude bukunika ithuba lokukhetha iinwele ezitshayisiweyo, ezinokufezekiswa ngokufaka imveliso kunye nokutshayela umphetho wakho omfutshane ukuya ecaleni.
ujustin beiber ukuchetywa kweenwele ezintsha
Izitayile ezinde zeenwele ezishinyeneyo
Zininzi iinwele ezipholileyo ezinde zamadoda aneenwele ezishinyeneyo. Ngelixa iifayile ze indaoda elungile , i-ponytail kunye neqhina eliphezulu lihlala lihle Izitayile zehipster , abafana banazo nezinye iindlela ezinje ngokusika ubude begxalaba okanye iinwele ezinde ezikhululekileyo, ezihamba simahla.
Xa undwendwela u-stylist wakho, konke ekufuneka kwenziwe kukwacutha iingcebiso zokuthintela ukwahlukana. Emva koko, isitayile iinwele ezinde ezishinyeneyo yehla ekusebenziseni i-wax yokubamba ukukhanya okanye udongwe kulolongezo lobume. Ukuhamba kwendalo kweenwele ezinde yeyona nto intle.
Ezona mveliso zeNwele zaMadoda ziBalaseleyo kwiNwele ezijiyileyo
Ukuba ujonga ezona mveliso zeenwele zibalaseleyo zeenwele ezishinyeneyo, kunzima ukufumana nantoni na ebhetele kune-pomade elungileyo, i-wax yeenwele okanye udongwe. Ngokucacileyo iimveliso ezahlukeneyo zesitayile zibonelela ngezibonelelo ezahlukeneyo kwaye zisebenza ngcono ngeendlela ezithile zeenwele kunye neenwele.
IPomade iye yeyona mveliso yeenwele ithandwayo emadodeni. Iimpawu eziphezulu zihlala zibonelela ngokubamba ngokuqinileyo ukuya kuthi ga kwinqanaba lokuqaqamba eliphakamileyo. Ukuba ufuna into yokulawula iinwele ezingqindilili ezigobileyo, sicebisa ukuba uthenge eyona pomade yomeleleyo ungayifumana; Ngaphandle koko, ukubamba okuphakathi ukuya phezulu kukulingana okuphakathi kokulawula kunye nokubanakho kwesitayile. Ezona pomade zibalaseleyo zamadoda zivela kwezinye zeempawu ezaziwayo kwihlabathi, kubandakanya iSuavecito, Layrite, Baxter yaseCalifornia, Imperial Barber, Uppercut Deluxe, American Crew, kunye neSmooth Viking, ukubiza nje ezimbalwa.
ISuavecito Pomade Firme (eyomeleleyo) Bamba i-4 oz 8.866 Izinto ezithethwe ngabantu $ 14.85 Jonga iAmazon
I-Layrite Superhold iPomade, i-4.25 oz Izimvo eziyi-3,841 $ 18.00 Jonga iAmazon
I-Imperial Barber Classic Pomade, i-6 oz Izimvo eziyi-1,386 $ 22.00 Jonga iAmazon
I-Wax yeenwele kunye nodongwe
Ukuba ujonge ukugqitywa kwe-matte engaphezulu eya kuzisa inkangeleko yendalo, emva koko sicebisa ukuba ukhethe i-wax yeenwele elungileyo okanye udongwe. Ezona ndidi zeenwele kunye neemveliso zodongwe zibonelela ngokubamba okuphantsi ukuya kweliphakathi ngaphandle kokuqaqamba okuphantsi. Kwiinwele ezingcolileyo ezifuna intshukumo engaphezulu, ivolumu kunye nokuthungwa, uyakuxabisa ukubamba okuhle kwezi mveliso zeenwele. Iimpawu ezikumgangatho ophezulu ze-waxes kunye nodongwe zibandakanya i-TIGI, i-American Crew, iRedKen, iGatsby, kunye noJack Black.
I-TIGI yeNtloko yeBhedi yaMadoda eyaHlulwa ngokuSebenza ngeWax, i-3 yeeyunce Izimvo eziyi-3,995 $ 12.99 Jonga iAmazon
Ezona ndlela zilungileyo zokuhombisa iinwele ezishinyeneyo
Ukufumana kunye nokuyila enye yezi ndlela zangoku zokucheba iinwele lukhetho olukhethileyo awuyi kuzisola. Njengotyekelo lweenwele zamadoda ezishushu, ezi ndlela zisikiweyo kunye nezitayile ziya kunyanzeleka ukuba ume kuso nasiphi na isihlwele. Ukuba uye wasikelelwa ngesipho seenwele ezishinyeneyo, thatha ithuba kwaye wonwabele imivuzo yokukwazi ukufumana ezona zinwele zilungileyo zamadoda zonyaka.
I-messy Curly Thick Hair + Mid Skin Fade
Umbala wePompadour + oPhezulu oPheleyo + woYilo lweenwele
I-Fohawk + i-Undercut Fade
Iinwele zeSpiky ezinombala + Fade ezisezantsi
Icandelo elisecaleni lePompadour + Razor Fade + Line Up
Icala eliTyiweyo elibunjiweyo
Iinwele eziQinisekisiweyo eziBuyelwe ngasemva + Ukuphela kweTaper
Ikama elide ngaphaya kweTaper Fade
Umyalezo oMiselweyo weThafile + uFade ophantsi
Iifutshane eziQhelekileyo eziPhezulu eziPhezulu + eziPhantsi ziMilo
Ubunzima obuVuthayo obuBuyayo + oPhezulu oPhezulu
Ikama Ngaphezulu kwe-Undercut + Inxalenye Enzima
Iinwele ezijiyileyo zeSpiky + Amacala achetyiweyo
Iinwele eziBhulashiweyo + eziPhakamileyo zeTaper Fade + iindevu ezipheleleyo
Isidindi seMessy Part + Amacwecwe atyhidiweyo + Iindevu ezixineneyo
amadoda ubude beenwele iinwele
bala inyanga kunye nophawu ukunyuka
iinwele ubude begxalaba indoda
yintoni umqondiso wam
umkhulu wam 3
brad pitt iinwele ezimfutshane
indlela yokufumana uphawu olunyukayo